Fanamby amin’ny fiainana :: Zazalahy manana nofy goavana na dia very ray sy reny ary zandry aza - ewa.mg
News - Fanamby amin’ny fiainana :: Zazalahy manana nofy goavana na dia very ray sy reny ary zandry aza
Mangidy sady mafy raha mbola fahoriana no nandalovan’ity ankizilahy iray, roa taona lasa izay (ny alin’ny 26 aogositra hifoha 27 aogositra 2018), raha izy vao 8 taona monja. Tao anatin’ny indray mipi-maso no nandripahan’ny tsy mataho-tody an’ireo nahitany masoandro sy ny zandriny vavy, efataona. Mickael Rakotorahalahy irery, izay mandia ny faha-10 taonany ankehitriny, no sisa velona tamin’ ity fianakaviana ity, taorian’ ny herisetra tsy manampaharoa nihatra tamin’ny fianakaviany, tany Mamoladahy, Imerintsiatosika. Nitondra vohoka dimy volana aza ilay reniny, tamin’ny fotoana nisehoan’ny voina.
Zary fanoitra hoentin’ i Micka miatrika sy ho tafita amin’ny fiainana ny zava-niseho. Isan’ireo ankizy mendrika any am-pianarana sy any am-piangonana izy, ary vao nahomby tamin’ny fanadinam-panjakana CEPE farany teo. Manohy ny fianarany any Sandrandahy, Fandriana, izay tanàna misy ny raibeny sy ny renibeny ny zazalahy. Nanolo-tena hitaiza azy ireo ray amandrenibe ireo. Ny ho tonga mpitsara na mpanamory fiaramanidina no nofinofy goavana manosika an’ i Micka amin’ny filofosany any an-tsekoly isan’andro.
Avotry ny fialan-tsasatra
Tahaka ny efa lahatra manokana ny an-dRakotorahalahy Mickael, satria niala sasatra tany Sandrandahy Fandriana no nahatonga azy tsy ho isan’ny lasibatr’ireo namono ny ray aman-dreniny sy ny zandriny. Ny raibeny sy ny renibeny, avy amin’ ny dadany, ireto mitaiza azy.
Tsy mba manana taranaka intsony iretsy olon-dehibe, ka isan’ny antony nakan’ izy ireo an’i Micka ho toy ny solon-janany. Roa taona talohan’ny nahafatesan’ireo mpianakavy kely no efa nindaosin’ny fahafatesana ihany koa ny zandrin’i Nantenaina Rakotorahalahy, rain’i Micka. Izy mirahalahy irery no mpiray tampo.
Mazoto amin’ny fianarana i Micka. Fony izy kilasy fahavalo no efa nitazona ny laharana voalohany hatrany tany an-tsekoly. Mianatra amina sekoly tsy miankina izy, ankehitriny, sady tezaina ihany koa amin’ny finoana kristianina, araka ny fitantaran’i Olga Razanabary, renim-pianakaviana nanangana an’i Malalatiana Juliana, renin’i Micka.
« Zaza tena mahay izy ary mikendry ny ho lasa ambony eo amin’ny fiainana hatrany, na any an-tsekoly hatrany am-piangonana », hoy iry reniben’i Mickael avy amin’ny reniny.
Nampahafantarin’ itsy farany fa « mpitarika tanora kristianina sady mpamoron-kira ho an’ny antoko mpihira ny raibeny sy ny renibeny. Nisy fotoana nandehanan’izy ireo teto Fianarantsoa niaraka tamin’io antoko mpihira io, ka nipetraka tato amiko i Mickael ». « Tsapako fa ny fahoriana nidona taminy no isan’ny nanosika azy vao mainka hihoitra eo amin’ny fiainana », hoy ihany izy.
L’article Fanamby amin’ny fiainana :: Zazalahy manana nofy goavana na dia very ray sy reny ary zandry aza est apparu en premier sur AoRaha.
Mamoaka entona mangeja hafanana (gaz à effet de serre) be indrindra eto Madagasikara ny sehatry ny ala. Anisany mahatonga izany ny doro tanety, ny fanapahana ny ala. Isan-taona dia manao tatitra momba ny fandrefesana ny entona mangeja hafanana ny firenena malagasy satria nankatoa ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ho fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo teknisianina amin’ny fandrefesana ity entona ity eo amin’ny sehatry ny ala dia manatanteraka atrik’asa fampiofanana ny birao nasionaly mpandrindra ny REDD+ (BNC REDD+), eo ambany fiahian’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ao anatin’ny telo andro. Nanomboka omaly 16 aprily ary hifarana rahampitso 18 aprily 2019 izany. « Hatramin’izay efa nanao tatitra momba ny entona mangeja hafanana i Madagasikara. Mbola nahitàna tsy fahatomombanana anefa izany ka izany indrindra no tanjon’ity atrik’asa ity mba hanatsarana ny tatitra atao », hoy ny mpandrindra nasionaly ny BNC REDD+, Rakotosoa Andrianina nandritra ny fanokafana ny atrik’asa. Tohana avy amin’ny fanjakana amerikanina amin’ny alalan’ny USAID sy ny USFS ity fampiofanana ity. Ao anatin’ny fiofanana ny fampiasana ny rindram-baiko vaovao ALU, fandrefesana etona mangeja. Raha ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny BNC REDD+ hatrany dia ao anatin’ny fanatanterahana ny rohi-fiasa REDD+, miompana amin’ny fanalefahana ny fiovaovan’ny toetry ny andro amin’ny alalan’ny fanomezana tambiny ara-bola ireo ezaka fampihenana ny entona mangeja hafanana vokatry ny faharipahana sy ny fahasimban’ny ala ihany koa ity atrik’asa ity. Vokatry ny fiakaran’ny tahan’ny entona mangeja dia simba ny sosona ozonina ka izay no miteraka fiovaovan’ny toetry ny andro. Manoloana izany dia manana vina hampidina ny entona mangeja ho 14 isan-jato i Madagasikara. Lynda A. Cet article ENTONA MANGEJA HAFANANA : Tompon’antoka ihany koa ny sehatry ny ala est apparu en premier sur déliremadagascar.
James Kaylah: “Aza tsaraina ivelany ny mpivoy rap underground”
Ao ny talenta fa tsy latsa-danja ihany koa ny fananana safidy. Ahavitan-javatra ireo rehefa mitambatra. Tsy ampy ilazana ny momba ny mpanakanto anefa io endriky ny kanto vitany io raha ny nambaran’i James Kaylah.“Mila famonjena”… Hira vaovao be, novokarin’i James Kaylah efa naparitany any amin’ny tambajotran-tserasera youtube any, amin’izao fotoana izao, nivoaka ny 3 jolay teo. Ankoatra izay, efa eo am-piketrehana ny rakikirany ny lehilahy. Tamin’ny taona 2007 izy no niditra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto, amin’ny fiangaliana mozika “rap ambanin’ny tany” antsoin’ny hafa koa hoe “rap ambany gorodona” (rap underground).Araka ny nambarany, tsy manao ny rap ho antom-pivelomana izy fa mampita hafatra ho an’ny mpiara-belona noho ny adidy amin’ny famolavolana ny tanora sy ny fiarahamonina ho tonga olombanona.“Maro ny mihevitra fa olona somary maditra ny mpanao mozika hip hop noho ny tononkira mivantana sy ny fampiasana voambolana maherihery mora raisina avy hatrany. Na izany aza, ankafizo hatrany ny rap ary aza tsaraina ivelany ny olona mpivoy azy ireny», hoy i James Kaylah, nanazava ny fiheverany ny tontolon’ny rap.Na tsy re firy aza izy, miketrika mangingina ao ambadika ao ihany. Anisan’ny nisongadina hatramin’ny nilomanosany eo amin’ity tontolo iray ity ny nandraisany anjara tamin’ny “Label Mizara Mic II”, ny taona 2009. Tao ihany koa ny fampiaraham-peo tamin’ny 8 Mena Maso Bira. Misokatra ny amin’ny fiaraha-miasa i James Kaylah ka ireo maniry ny hitafatafa aminy, misy ny tambajotran-tsosialy facebook: James Kaylah, na mitsidika ny pejy: James Kaylah Öfisialy.NarilalaL’article James Kaylah: “Aza tsaraina ivelany ny mpivoy rap underground” a été récupéré chez Newsmada.
Tsy niandry ela. Sioka tokana tokoa mantsy no nataon’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, amin’ny fanalàna na/sy fanesorana ny fako sy ny loto eto Antananarivo Renivohitra, dia nihetsika avokoa ireo tompon’andraikitra misahana izany ary nifanome tanana tamin’ny mponina isaky ny boriboritany enina. Vantany vao nanao antso avo ary nanome toky ny vahoaka amin’ny fanadiovana ny tanàna ny kandidà Marc Ravalomanana, avy hatrany dia nandray ny andraikitra tandrify azy avokoa ny teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Tsy ity farany ihany anefa no misahana izany fa hatramin’ny Samva, izay tena tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanesorana ny fako eto an-dRenivohitra, izay nifanome tanana tamin’ireo mponina amin’ireo faritra maro isaky ny boriboritany. Avy hatrany mantsy dia nihetsika avokoa ireo kamiaoben’ny CUA niaraka tamin’ireo an’ny Samva ka nanala ireo fako nisavovona tamin’ireo daba-pako isaky ny fokontany teto Antananarivo. Nanome tanana amin’ny fandraofana sy fanesorana izay tandrify azy ihany koa ireo mponina. Marihina mantsy fa nanaovan’ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian « bemarenina » sy « masobe tsy mahita » ireo loto nivangongo teto an-dRenivohitra hatramin’ny nipetrahan’izy ireo teo amin’ny toerana misy azy. Niaina tao anaty loto sy fako hatrany ny vahoaka na ny marimarina kokoa ny mponin’Antananarivo nandritra ny volana maro. Tsy amin’ny maha mpanolontsaina manokan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo ihany anefa fa amin’ny maha kandidà Filoham-pirenena azy, ary indrindra, ny fahitany sy fahatsapany ny fahorian’ny vahoaka amin’ny andavanandrom-piainany mihitsy no nandraisany fanapahan-kevitra tsy niandry izay an’ny governemanta tsy ho tazana sy ho hita. Noho izany indrindra, ny kandidà Marc Ravalomanana no nahavita nanala an’Antananarivo tao anatin’ny fako sy ny loto. Araka ny nambarany mantsy fa zava-doza ary hitera-doza ho an’ny mponina sy ny renivohitra ny fivangongoan’ny fako sy fiparitahan’ny loto ka anisan’izany ny mety hiparitahan’ny aretina na/sy valan’aretina, ny tondra-drano satria anatin’ny vanim-potoan’ny orana isika izao… Hita taratra amin’izany fa mbola to-teny ary mbola ankafizin’ny vahoaka ny fitantanan’i Marc Ravalomanana tamin’ny fitondrany ary mbola miandrandra azy fatratra ny mponina hanala an’i Madagasikara anatin’ny fahantrana. MN L’article Marc Ravalomanana : Nanala an’Antananarivo tao anaty fako est apparu en premier sur .L’article Marc Ravalomanana : Nanala an’Antananarivo tao anaty fako a été récupéré chez Triatra.
valandresaka mahasika ny CORONAVIRUS niarahana tamin’ ny talen’ny DVSSER
Manoloana ny fiatrehana ny ady amin’ny famongorana ny COVID-19 dia nisy ny valandresaka mahasika izany niarahana tamin’ ny talen’ny DVSSER androany 29 oktobra 2020. izay niresahany sy nitondrany fanazavana momba ny mason-tsivana izay atao amin’ny fanaovana fitiliana sy ireo toerana fanaovana izany. Novelabelariny tao anatin’izany ihany koa ny fepetra rehetra raisina mahasika ireo olona tonga amin’ny « vol de rapatriement ». Tsara ny manamarika fa mbola misy hatrany ny fanaovana fitiliana na dia efa nahitana fihenana ary ny tranga vaovao. Sary sy Fanadihadiana : DC/SCM-MSANP L’article valandresaka mahasika ny CORONAVIRUS niarahana tamin’ ny talen’ny DVSSER a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Faritra Anosy sy Androy: nojeren’ny minisiteran’ny Indostria ny momba ny kere
Ny 23 sy ny 24 oktobra teo, nitarika atrikasa tany amin’ny faritra Anosy ny minisitry ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana (Mica), Rakotomalala Lantosoa. Atrikasa hiatrehana ny kere any atsimo, araka ny toromariky ny filohan’ny Repoblika, ny natao tamin’izany, niarahana amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana.Anisan’ny laharam-pahamehana ny famatsiana ireo zavatra ilaina andavanandro (PPN) any amin’ny faritra hamahana ny olana sy hanamorana ny fizarana izany any amin’ny faritra Anosy sy Androy, amin’ny vidiny rariny. Nandritra izany fotoana izany, nohararaotin’ny minisitra ny fandalovana amin’ny seranan-tsambon’i Ehoala, nandraisana kaontenera 150, izay tsy ho tapaka isaky ny telo volana. Ny 75 % amin’ireo PPN ireo tonga tao amin’ny seranan-tsambo. Nitarika fivoriana niaraka amin’ireo tompon’andraikitra any an-toerana ny minisitra. Hatao izay fomba rehetra hizarana izany ara-drariny ho an’ireo faritra roa ireo.Fepetra noraisina koa ny fiarovana ny mpanjifa, nizahana ireo entana any amin’ny mpamongady, ny fizahana natao tampoka. Hita ary nakatona tamin’izany ireo tranombarotra lehibe tsy manana antontan-taratasy, manamarina fa afaka mampisondrotra ny vidin-javatra. Nisy koa ny fihaonana amin’ireo mpanao asa tanana, nifanakalozan-kevitra hitadiavana lalam-barotra. Namaranana ny fitsidihan’ny minisitra Rakotomalala Lantosoa, nitsidika ny orinasa mpanodina vokatry ny fambolena, anisan’ny vahaolana amin’ny ady amin’ny faharatsian-tsakafo.R.MathieuL’article Faritra Anosy sy Androy: nojeren’ny minisiteran’ny Indostria ny momba ny kere a été récupéré chez Newsmada.